သက်ဆိုင်ရာ Postတွေ၊ လူတွေရှာချင်တဲ့အခါမှာ Hashtag(#) ကိုအသုံးပြုနိုင်တော့မယ့် Instagram! – AsiaApps
December 20, 2017 December 27, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on သက်ဆိုင်ရာ Postတွေ၊ လူတွေရှာချင်တဲ့အခါမှာ Hashtag(#) ကိုအသုံးပြုနိုင်တော့မယ့် Instagram!
“#” ဆိုတာကတော့ Instagrammer တွေမရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ Keyboard ထဲကအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “#” မသုံးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဘာမှတော့ မဖြစ်ဘူးဗျ။ စစချင်းစမ်းသုံးကြည့်၊ စမ်းသုံးတာများတော့အကျင့်ဖြစ်လာ၊ အကျင့်ဖြစ်လာပြီး သုံးပါများလာတော့ Trend တစ်ခုဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “#” မသုံးလို့ခေတ်မမှီဘူးလို့တောင်ပြောတဲ့လူတချို့ကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကတော့ အရင်က Instagram မှာ Post တွေတင်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Hashtag(#) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Instagram ရဲ့ Update အသစ်မှာတော့ Hashtag(#) တွေကို Post တွေတင်တဲ့အချိန်မှာသာမက မိမိသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာ Post တွေ၊ လူတွေကိုရှာဖွေချင်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Search box မှာ “#” ရယ်၊ “#” ရဲ့အနောက်က မိတ်ဆွေရှာဖွေလိုတဲ့ နာမည်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီနာမည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Photo, Video တွေအကုန်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
“#” နဲ့လူရှာမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူက မိတ်ဆွေနဲ့ Follower ချင်းအနည်းငယ်တူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Instagram Bio မှာ Hashtag(#) ပါဝင်တဲ့ စာကြောင်းတစ်ခုခုရှိနေမှပါ။ အပေါ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်နှစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီမှသာ Instagram က သူငယ်ချင်းတွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hashtag(#) အသုံးပြုမှုပုံစံအသစ် ကို မိမိဝါသနာပါရာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေနိုင်အောင် ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
“Everyday, millions of people share photos and videos and tag them with relevant hashtags. #onthetable, #slime and #floralnails are justafew examples of hashtags that represent the many interests and passions of our community. To make these posts even more discoverable, we’re introducing hashtags you can follow.”-Instagram
အခု Update ရဲ့ Feature အသစ်ကတော့ Android နဲ့ IOS Platform နှစ်ခုလုံးမှာတစ်ပြိုင်နက်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်တာကြောင့် Instagram အသုံးပြုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ အဲ့ဒီ Feature အသစ်ကို အချိန်အားရင် လျှောက်စမ်းကြည့်ကြဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ လျှောက်စမ်းကြည့်လို့ကျွန်တော်မပြောမိတာတွေ့ရင်လည်း အောက်က Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။